အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့သော ဘ၀တစ်ခု၏ ရာဇ၀င်: April 2009
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, April 29, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
ခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါရမ်းပြီး ငြင်းကြည့်တယ် မရပါဘူး မယူလို့မှမရတော့တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပြီ
မယ်ဆိုတာကလွဲပြီးဘာမှ မတွေးတတ်သေးဘူးလေ။သူများပေးတိုင်းမယူရဘူးဆိုတဲ့ စကားကိုမြေဝယ်
မကျပေါ့။မေမေကပြောမှ သားရယ့်အန်တီကသားကိုစားစေချင်လို့ပေးနေတာ ယူလိုက်လေဆိုမှ ကျွန်
တော်ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်လက်သေးသေးလေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကို ခံလိုက်ပါတယ်။လက်ထဲမှာသပျစ်သီး
ခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါရမ်းပြီး ငြင်းကြည့်တယ် မရပါဘူး မယူလို့မှမရတော့တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပြီ
စာရွက်ကလေးမှာ ကျွန်တော့်နေရာက အဆင့်နှစ်တဲ့။မေမေ့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုမတည်သလိုဖြစ်သလို
မှာပဲ။စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းမှုတွေအပြည့်နဲ့ ဆရာမကမ်းပေးလာတဲ့ စာရွက်ကလေးကိုယူခဲ့ဖူးတယ့်။
ပည့်တစ်ယောက်ကကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ဆိုပြီးမုန့်တွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့်အတွက် စက်ဘီး ကလေးတစ်
စီး လက်ဆောင်ဝယ်လာပေးခဲ့တုန်းကပေါ့။ဖေဖေတို့ကတော့မယူဘူးလို့ ငြင်းနေကြတယ်လေ့ကျွန်
တော်ကတော့ မယူဘူးငြင်းနေပေမဲ့ စက်ဘီးအဟောင်းလေးထက်အပုံကြီးလှနေတဲ့ ဒီစက်ဘီးအသစ်က
လေ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုယူချင်စိတ်မရှိတာပါ။ကျွန်တော် ၁၀ တန်းအဆောင်နေရအောင်ဆိုပြီး
မန္တလေးမှာသွားတတ် ဖို့အတွက် အဆောင်ခကြိုတင်ငွေပေးချေတဲ့ ဘောက်ချာနဲ့ ကားလက်မှတ်ကလေး
တစ်စောင်ပေါ့ ။သူများပေးတိုင်းမယူရဘူးဆိုတဲ့မေမေ့စကားမှာ မေမေပေးတိုင်းလဲမယူရဘူးဆိုတာများပါ
ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပါသေးတယ်။ အရည်တွေလဲ့နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော် မေမေကမ်း
ပေးလာတဲ့ စာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ကို ရိုရိုသေသေ လက်ခံ ခဲ့ရဖူးတယ့်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပေးတဲ့ အသဲပုံ ချောကလက် ကလေးကို ကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးထင်ပြီး ၄ ရက်တိတိ
မေမေ့ကိုအသိမပေးပဲနဲ့ယူခဲ့ဖူးတယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုမေမေသိသွားတော့ အသည်းပုံ ချောကလက်
၃ဗူး ဝယ်လာပြီးမနက်ဖြန်ကစပြီးသူပေးတာမယူ နဲ့တဲ့။ဒါတွေကိုကြိုက်သလောက်စားတဲ့။သူပေးတာကို
ဆက်ပြီးယူနေအုံးမယ်ဆိုရင် မေမေ့အဆိုးမဆိုနဲ့နော်တဲ့။အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော် သယ်ရင်းကောင်မလေး
ပေးလာတဲ့ အသဲပုံ ချောကလက်ကလေးတစ်ခုကို မေမေ မသိအောင် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တိတ်
တိတ်လေး နဲ့တစ်ခါ ထပ်လက်ခံမိခဲ့သေးတယ့်။
ပွဲ မှာ ပါတနာတွေ ကမ်းပေးလာတဲ့ ဝိုင် တစ်ခွက်ကို ဖေဖေနဲ့မေမေ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းပန်ရင်း
မြိုချခဲ့ရတယ်။အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့ လည်ထွက်နေတဲ့လောကကြီးကိုအံတုလို့ ပီကေ တစ်တောင့်ကို
တစ်ပြိုင်ထဲ ဝါးစားရင်း ယိုင်နဲ့နဲခြေထောက်တွေကို ဟန်ဆောင်ထိန်းရင်း ရစ်သစ်သစ်အတွေးတချို့နဲ့အိမ်
တယ် မရပါဘူး မယူလို့မှမရတော့တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပြီလေ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုယူချင်
စိတ်မရှိတာပါ့့ဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကိုသွေဖယ်ရင်း ကျွန်တော်ကိုယ့် feelနဲ့ ကိုယ်လိမ့်နေခဲ့ဖူးတယ်။အဲ
တာကတော့ သား ရေ ညစောစော အိပ်နော်ဆိုတဲ့ မေမေ တို့ရဲ့ အမှာစကားနောက်မှာအခန်းတံခါးကို
Lock ချပြီး သန်းခေါင်ကျော်အထိ ကွန်ပျုတာရှေ့မှာအချိန်ကုန်နေတတ်ခဲ့တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ မေမေ
တို့ကိုတောင်းပန်နေမိပါတယ်။ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ရဲံ့စကားကို သား နားမထောင်တာမဟုတ်ပါဘူ့းသား
ချစ်တဲ့ သယ်ရင်းတွေအတွက် သား ဝါသနာပါတဲ့ ဒီ Blog ရေးချင်တဲ့ အကျင့်ကလေးကိုမစွှန့်လွှတ်နိုင်
သေးတာကြောင့် သား ကိုခွင့်လွှတ်ပေး ကြပါလို့ တိတ်တိတ်ကလေးတောင်းပန်ရင်းနဲ့ အခုလက်ရှိရေး
နေတဲ့ ဒီ Post လေးကို တိုးတိုးလျှလျှ လေးတောင်းပန်သံတွေကြားကနေတင်ဖြစ် အောင်တင်လိုက်မိ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, April 28, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
၁၉၉၂ခုနှစ်မှာတော့ ဖေဖေ မေမေ တို့ရဲ့စိတ်မကောင်းမှုတွေကျွန်တော့်ရဲ့ဝမ်းနည်းငိုကြွေးမှုတွေကိုအရင်း
၁၉၉၄ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ကကြီး ခခွေး တွေပေကျံ နေတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ပေါ့။အင်္ဂျာီ
အဖြူကိုအနီဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ပညာမှာတော့တဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ငပေ ကလေးတစ်
စာလေးတွေကို တေဇ၊ရွှေသွေး တွေနဲ့အတူအပြိုင်ဖတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့။
တဲ့စီမံကိန်းနဲ့မိဘတွေနဲ့အတူနေ့ရက်တွေကိုကုန်လွန်နေတဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့ ။ စာကျက်မယ် Blog ရေး
မယ် DJ လုပ်မယ် အဲလောက်ပါပဲ ။ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသေးပါဘူး။
နဲနဲပါးပါးတော့အပျော်အပါး ရှိတာပေါ့လေ။အချစ်နဲ့ပက်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံးသူကို
လက်ညှိုးထိုးပြပါ့မယ် ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ကလွဲလို့ကျန်တာ မရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။လက်ရှိအခြေအနေကို
ပြောပြတာပါ။ နောက်တော့ နောက်ပေါ့နော် ဟားဟား အာမ မခံဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တွေးထားတာကတော့မနက်ဖြန်အနည်းငယ်လောက်ပဲတွေးထားတာမို့ ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ချရေး
ဂဏ်ကို ကျွန်တော်လက်ပိုက်ပြီးတော့ စောင့်ကြိုနေတာပါ။့
လူတွေထဲကလူတစ်ယောက်ပေမဲ့့သူများတွေလိုမဟုတ်တဲ့့ဖြိုးဇာနည့်ည့၁၁း၂၉တိတိ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, April 27, 2009 in ဇာနည်ကြိုက်တာဒါလေးတွေ
အနိုင် အချစ်ရေ အချစ်ရေ နောက်မခေါ်တော့ဘူး.......
ပိုးအိစံ မောင်ခေါ်ရာ လိုက်ခဲ့တော့မယ် ရွှေမြို့ မောင်ကြီးရေ .......
စိုးစန္ဒာထွန်း မောင့်အချစ်မြားစူး ရူးရပြီပေါ့လေ....
လေးဖြူ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ ဟေ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့....
Lဆိုင်းဇီ လာချင်ရင် အနီးလေး....ကြိုမယ်ရှင့်.....
မျိုးကြီး မလာပါနဲ့ အချစ်ရယ်မလာခဲ့နဲ့
နန်းစုရတီစိုး ကျမနောက်ကို မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ မေမေဆူလိမ့်မယ်...
မိုးမင်း မင်းသဘော မင်းသဘော မင်းသဘောပဲ.....
Rဇာနည် ရေမြေခြားသွားရတော့ မင်းလေးကိုထားခဲ့ ရပြီပေါ့............
NO နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မှာပဲ.......
Cobra.. ငါလေမင်းနဲ့ဝေး အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ မင်းက နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရသွားပြီ
အငဲ ဟောင်းသွားပြီလား ....ဟောင်းသွားပြီလား......
စိုးစန္ဒာထွန်း မနှောင်းသေးပါဘူး...မဟောင်းသေးပါဘူး အချစ်ရေ.....
Lဆိုင်းဇီ ဖုန်းဆက်လည်း မပြောချင်ဘူးလား.....
၀ိုင်ဝိုင်း တော်ပြီကွာ ဒီဖုန်းစုပ်ကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်စမ်းပါ.....
ထွန်းအိန္ဒြာဗို ငါလေ မြင်နိုင်ရင် နင့်ကိုပြချင်တယ်......
ဗဒင် မြင်တယ် အိပ်မက်ထဲလည်းမြင်တယ်၊ စိတ်ကူးထဲလည်း မြင်တယ်...
ဗဒင် လမ်းကြားမှာ အလစ်သုတ်ပြီး ခိုးနမ်းတုန်းကပေါ့.....
တင့်တင့်ထွန်း နမ်းပါ နမ်းပါ နမ်းပါ..... ....
ဖြိုးကြီး ဝေးဝေးသွားလို့ မရအောင် အချစ်ရယ် ဖက်ထားချင်တယ်......
တင့်တင့်ထွန်း ကြိုက်တယ်....မင်းလုပ်သမျှ ကြိုက်တယ်.....
ထူးအိမ်သင် မေ့လိုက်တော့ အချစ်လေးရေ............
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ငါတော့မေ့လို့မရနိုင်ဘူး အချစ်ဆုံးရေ..........
လွှမ်းမိုး စိတ်ညစ်လို့ အရက်ကိုသောက်တယ်........
မေဆွိ စိတ်ညစ်ရင် ဂစ်တာတီးပါလား ကိုကိုရယ်.........
စည်သူလွင် အချစ်ရေ ......ကိုယ့်ကြောင့်........
ခင်ဖုန်း မင်းကြောင့် မင်းကြောင့် ပါနော်.......
(ခင်ဖုန်းရေ သူ့ကြောင့်ပါတဲ့ ဝန်ခံနေတာခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ )
သီရိဆွေ နင်နဲ့ငါနဲ့ ...ငါနဲ့နင်နဲ့....အိုး...အိုး......
ရွှေပြည်တန်သိန်းဇော် အိစက်ညက်ညောတဲ့ ဖဲမွေ့ယာပေါ်ဝယ်.........
စန္ဒရားလှထွတ် အိပ်မပျော်သော ညတစ်ည သံသရာဝယ်....
မေဆွိ ကြင်နာစွာ အိပ်ဆေးလေးများ ပေးပါ.........
(ဘာလို့ အိပ်မပျော်ကြတာလဲ ဘောပွဲတွေ ကြည့်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့)
သုမောင် စစ်ကိုင်းတောင်ကို အရောက်သွားလို့ ...တရားရှာမလေ .......
မေဆွိ ကိုကိုရေ ..ကွယ်ရာမှာ အခြေမများနဲ့နော်......ကိုကိုနော် နော်နော့်.....
(အော် ........တရားလည်း ဖြောင့်ဖြောင့် မရှာရပါလား)
ဖိုးသောကြာ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကကွယ် ပြောချင်တာတွေလည်း ပြောကြပါစေကွယ်...
သျှားအိဘိုဘိုဟန် အဖေအမေတွေက ပြောတာလား...အကိုမောင်တွေက ပြောတာလား.........
ဇော်ဝင်းထွဋ် ခေါင်းတွေကိုက်လို့ ကိုယ်တွေပူတယ် ဆေးခန်းသွားလည်း မသက်သာဘူးဟေ့.......
မေခလာ ဇွတ်ချစ်မယ်ဟေ့...... ဇွတ်ချစ်တတ်တာ ငါပဲ........
(မမမေခလာရယ် ဟိုက နေမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှ ဇွတ်)
ပန်းအိဖြူ စာဥတို့ သူငယ်ချင်းမတွေ ရေခပ်ဆင်းလို့လာ......
စိုင်းစိုင်း အိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့ ...အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့....
တွံတေးသိန်းတန် မိန်းမတွေ မာယာလောက်တော့ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ်.......
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, April 24, 2009 in ဒီလိုပဲပေါ့
သက္ကရာဇ် တစ်ချို့က တစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့်ကြွေချ.... ငါ့မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရက်စွဲလေးတစ်ခုက လှလှပပလေး ဘောင်
ခတ်ထားလေရဲ့... အမြင်တွေေ၀၀ါးနေဆဲ.... အသိတွေ မှောင်မိုက်နေဆဲ... အမှန်တရားအချို့အတွက် ငါ့နှုတ်ခမ်းတွေ ဆွံ့
ငါက ကားကားစွင့်စွင့် ပွင့်တတ်တဲ့ ပန်းကလေးလည်းမဟုတ်ခဲ့.... နေရောင်အကူနဲ့ ခေါင်းထောင်တတ်တဲ့ အငှားလင်းတတ်
တဲ့သူလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်.... ရိုးတံတွေ ရှည်ကောင်းရှည်ပါလိမ့်မယ်... ကျိုးမကျဖို့တော့ ငါ့နည်းနဲ့ငါ တောင့်ခံတတ်
ပါတယ်.... အလှတစ်ခုနဲ့ လူတွေကိုလည်း မဖျားယောင်းခဲ့ပါဘူး... ဘုရားစင်ပေါ်တင်ထားရလောက်အောင်တော့ ငါကမကြီး
မြတ်ဘူးပေါ့... ဒါပေမယ့် ငါလည်းပန်းကလေးတစ်ပွင့်ပါပဲ...
နေကြာဆိုတာ အပူကိုကြိုက်တတ်တဲ့ ပန်းကလေးပါတဲ့...
ခေါင်းတထောင်ထောင်နဲ့ လေတိုက်တိုင်းယိမ်းတတ်တဲ့ သူလိုငါလို ပန်းပါပဲ... ဘာမှတော့ပိုပြီး မထူးခြားဘူးပေါ့ကွယ်... အစွမ်း
ကုန်ပွင့်ဖို့ ပျိုးထောင်ပေးရင် အစွမ်းကုန်ပွင့်ပါတယ်... ဘာကြောင့်ပျိုးသလဲ... ဘာကြောင့်ပွင့်ခိုင်းသလဲတော့ ပြန်မမေးတတ်တဲ့
ပန်းကလေးပါ... သူသိတာက သူစွမ်းအားရှိသလောက် သူပွင့်ပေးမယ် အဆီတွေ အနှစ်တွေ ထုတ်ပေးမယ်... စားသုံးကြပါကွယ်....
လူသားတွေစိတ်ကျေနပ်မှု တစ်ခုအတွက်.. သူ့အသွေးအသားအသက်တွေ ပေးရလောက်အောင် ကြီးမြတ်ပေးတဲ့ပန်းကလေးပါပဲ...
အပိုင်းပိုင်းချိုးကြ ၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ကြ၊ အဆီအနှစ်တွေထုတ်ကြ၊ ငါဝတ်မှုန်တွေ စားသုံးကြ၊ ကျေနပ်နိုင်ကြပြီလား..
ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပြီလား... လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပြီလား... အောင်မြင်နိုင်ကြပြီလား... အပိုင်းပိုင်းလဲလျောင်းနေရတဲ့
ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့... သူလိုကိုယ်လိုပန်းပွင့်ကလေးတွေ ငြိမ်းချမ်းသွားကြပြီလား... စားသုံးမှုတစ်ခုအတွက် ပူပေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
ခေါင်းထောင်နေတိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်နေတယ်... ၀င့်ကြွားနေတယ်... အောင်မြင်နေတယ်လို့ မသတ်မှတ်ကြပါနဲ့ကွယ်...
နေကြာဆိုတာ အပူကြိုက်တာမှန်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် မျက်ရည်တွေ နာကျင်မှုတွေ ခံစားမှုတွေ အားလုံးကိုပိုက်ထွေးပြီး
အပူကြားမှာ ဟန်လုပ် ခေါင်းထောင်နေတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပန်းကလေးတွေပါ....
သူလည်း တခြားပန်းကလေးတွေလို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပန်ဆင်ခွင့် လိုချင်သူပါ....
သူလည်း တခြားပန်းကလေးတွေလို အိမ်ဦးခန်းက ဘုရားစင်လေးတွေမှာ နေချင်သူပါ....
သူလည်း တခြားပန်းကလေးတွေလို ပန်းစည်းလှလှလေးတွေကြားမှာ စံမြန်းချင်သူလေးပဲပေါ့...
အားလုံးကတော့ တညီတညွှတ်တည်း သတ်မှတ်ကြတယ်.... နေကြာဆိုတာ အပူကိုမှ ကြိုက်တဲ့ပန်းကလေးပါတဲ့......
သက္ကရာဇ် တစ်ချို့က တစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့်ကြွေချ.... ငါ့မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရက်စွဲလေးတစ်ခုက လှလှပပလေး ဘောင်ခတ်
ထားလေရဲ့... အမြင်တွေေ၀၀ါးနေဆဲ.... အသိတွေ မှောင်မိုက်နေဆဲ... အမှန်တရားအချို့အတွက် ငါ့နှုတ်ခမ်းတွေ ဆွံ့အနေဆဲ....
ငါမင်းကိုချစ်မိတာဟာ့သူများတွေလို မင်းနှဖူးလေးကို နမ်းချင်လို့
အခုတော့မင်းရဲ့ အသုံးချမှုတွေကိုသိသိကြီးနဲ့ အပြုံးတွေကိုပန်ဆင်ပြီး ပေးဆပ်သူသက်သက်အဖြစ်နဲ့မင်း အတွက်ရှင်သန်နေ
ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာလဲ ငါဟာ့မင်းကိုချစ်လို့ပါပဲမဟုတ်ဖူးလားဟာ့ဒါပေမဲ့ သက်သေပြပုံချင်းတော့လွဲမှားနေခဲ့တယ်ကွာ့
တကယ်တော့ ငါလဲ နေကြာပန်းပေမဲ့့မင်းအပေါ်မှာတော့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သူပါကွာ့
ဒါဟာ Restaurant များလား?????
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, April 22, 2009 in ကျွန်တော်ဇာနည်ရဲ့အတွေး
ငါထရမယ် ငါထရမယ် ငါထရမယ် ငါထရမယ် ငါထရမယ့်
FAIL CONTECT YOUR LIFE0o o o့့Game over
Gtalk မှမိုဘိုင်းသို့ SMS Message ပို့နိုင်တော့မည်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, April 20, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
Gtalk မှ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့သော်လည်းကောင်း မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ Gtalk သို့သော်လည်းကောင်း၊ Text Message များ
အပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက်
မိမိတို့လက်အတွင်းက မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် sms ကိုအသုံးပြုပြီး Gtalk သို့ Message ပေးပို့ခြင်း/ပြန်လည်၍ရယူနိုင်ခြင်း
တို့ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုလိုသူများအတွက် ကိုယ်ပိုင် account များဖွင့်ထားပြီးမှသာ အသုံးပြုနိုင်
မှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ ပြည်သူများအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် account များဖွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်
စမ်းသပ်ကာလမှာသာရှိသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Gtalk ဘက်မှသော်လည်းကောင်း
မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူဘက်မှသော်လည်းကောင်း တစ်ဘက်ဘက်မှ account ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီး အသင်းဝင်ဈေးနှုန်းများ
ကို eTrade Myanmar မှယခင် web to sms တို့ကဲ့သို့ပင် ကျပ်တစ်သောင်းနှင့် တစ်သောင်းခွဲဟူ၍ eTm Member Code
များဝယ်ပြီး အသင်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပို့သည့် message များပေါ်တွင်မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်ငွေကို တွက်ချက်ဖြတ်တောက်သွား
မှာဖြစ်ပါတယ်။ message တစ်ခုပို့ရင် 50 ကျပ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
“Gtalk“ ကနေမိုဘိုင်းဖုန်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ Gtalk ကိုပို့မယ်ဆိုရင် ရိုးရှင်းပါတယ်။ Gtalk သုံးသူတွေက gtalk@etmsms.com
ကို မိမိရဲ့ Gtalk account ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး အဲ့ဒီအကောင့်ထဲကို sms+space+ ဖုန်းနံပါတ် +space+ မိမိရိုက်လိုသောအ
ကြောင်းအရာ (ဥပမာ-sms 51xxxxx Hello World!)- တွေကိုရိုက်သွင်းပြီးပို့လိုက်ရင် တစ်ဘက်က မိမိပို့လိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကို
sms လိုင်းမှရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Gtalk သို့ဆိုလျှင်လည်း မိမိဖုန်းရဲ့ message box အတွင်းမှာ စာရိုက်တဲ့
အခါ +G ပြီးရင် မိမိပို့လိုတဲ့ gmail လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီး space ခြား (ဥပမာ+gyourid Hello World!)+ ပို့လိုသောအကြောင်း
အရာတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီး eTm ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဖုန်းသို့ပို့လိုက်ပါက မကြာခင်တစ်ဘက် Gtalk သို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
“ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Gtalk ကနေ တဆင့်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း
ကနေ message အထွက်ကို ပိုက်ဆံကျခံစရာမလိုဘဲ Gtalk မှဖုန်းသို့အ၀င်ကိုပဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းဘက်က member ဖြစ်ပြီး gtalk ဘက်က member မဟုတ်သူများအတွက် eTm ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဖုန်းကို
+add gmail account ဆိုပြီး မိမိရဲ့ဖုန်းကနေပြီး sms message လှမ်းပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မသိသောအခြားဖုန်းများက
message များပို့သွားပါက မိမိရဲ့ငွေကြေး balance တွေ အလဟသတ်မဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ gtalk ဘက်ကကော
မိုဘိုင်းဖုန်းဘက်ကပါ member ဆိုရင်တော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ sms ၊မိုဘိုင်းဖုန်းမှ email အဲဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပဲရှိခဲ့တာကနေအခုဆိုရင် မိုဘိုင်းဖုန်းက Gtalk ကိုပို့နိုင်တဲ့စနစ်
တစ်ခုကို eTrade Myanmar ကထုတ်လုပ်ပေးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်သိလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးဝမ်းသာသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံခြားမိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်နေသူတွေအတွက်ကတော့ gtalk တင်မကပဲ အင်တာနက်ပါ လိုသလိုအသုံးပြု
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေ စေနိုင်မှာဖြစ်လို့ပါ။တဆက်ထဲပဲကျွန်တော်
ပြောလိုက်ပါရစေ သယ်ရင်းတို့ ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနေကြပြီး Gtalkတတ်လိုသူများအတွက်(သိပြီးသူများနားလည်ပေးကြပါ)
အသုံးပြုနည်း softwareသွင်းနည်းမသိသေးတဲ့သယ်ရင်းများအတွက် softwareနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကလေးလိုချင်ပါက ကျွန်တော့်Cboxမှာအော်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် phyozarni13@gmail.comကိုADDပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ့
အသွားဖြောင့်ပါရစေ ဒေး ရယ့်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Sunday, April 19, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့, ဟာသ
“နေညိုချိန်တိမ်တောက်တဲ့အခါရွာလမ်းနံဘေးမှာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားထဲကလိုငါတို့ရွာရဲ့ ရွာလယ်လမ်း ကို ကတ္တရာခင်း
ပြီးတဲ့နောက် ရေစုပ်စက်နဲ့ရေတင်“စာဥ”တို့သူငယ်ချင်းမတွေ ရေခပ်မဆင်းပဲ chatting၀င် နေကြတဲ့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း
(globalization) ခေတ်ကြီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ ၊ တိုးတက်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘတ်စ်ကား(ဟာ…ဟုတ်ပါဘူး)ကမ္ဘာ့ ရွာ
ကြီးထဲမှာ ငါတို့ဆယ်အိမ်စုကနေ စီးပွားရေး ဈေးကစားလို့ မလေးရှားကိုအပြေးသွားပြီး စီးပွားရှာ၊ ကြီးပွားလာကြတဲ့ မလေးရှား
ပြန်တွေ ရဲ့ သူဌေးသားဟန်တွေကို နင့်အမေကြီးက စီးပွားရေးအတွက်ချော်ပြီးသားမက်တော်ချင်နေပြီတဲ့ ဒေး ရေ……
အခုအချိန်မှာမလေးရှားပြန်တွေရဲ့ခြေတစ်လှမ်းကကုဋေတစ်သန်းလို့ထင်ရလောက်အောင် ရင်းဂစ်သံတ ညံညံ ပေးနေလေတော့
နင့်အတွက်ငါအမှန်အကန်လေးရပြီပေါ့…..ဒေး ရယ်…၊အခုတော့ငါ့မှာ အာဆီယံဆိုတဲ့ အသင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်
(မသိရင်အတွင်းရေးမှုးချုပ် နဲ့ပဲအိမ်နီးနားချင်းနေဖူး သလိုလို)ကွာလာလမ်ပူရောက်ခဲ့တဲ့သူဟာငါ့အတွက်တော့မဟာရန်သူပါပဲ
ဒေး ရယ် ၊ ဒါ့ကြောင့်ဟိုးအရင်တိတ်တခိုး နဲ့ ကြိတ်ပိုးခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ဆိုးတွေကို ထားခဲ့ပြီးအခုလို ၀ရုန်းသုန်းကား အမြန်လေး
နဲ့အသုံးအနှုန်းစကား အမှန်ရေးပြီး၊နင့်ဆီကိုအချေး(ချီး)အငှားမပါတဲ့ ရည်းစားစာကို အဆွေးတချို့နဲ့ရေးပို့လိုက်ရပါတယ်…။
ဒီမှာ ဒေး နင်တို့သားအမိအရမ်းလေးစားတဲ့မလေးရှားပြန်တွေစီးတဲ့ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ဝမ်းတူးဖိုက်(125)ကအပြင်အဆင်တွေ
အရမ်း ထူးပြီးမိုက်နေလို့လား…။ ဟိုးအရင်ငါကြိတ်ပိုးနေခဲ့တုန်းက ခိုင်းချင်ရာခိုင်းမညည်းမညူ အပြေးအလွှားသွားပေးနေ
တုန်းကတော့ အကြမ်းပတမ်းခံတဲ့ ၀မ်းတန်း(110)အမှန်လေးလို့ပြောခဲ့တဲ့ ငါ့ဆိုင် ကယ်လေးကိုနင်ကမေ့သွားပြီလား ဒေး ရယ်၊
“မြင်နိုင်ရင်လေကိုယ့်ရင်ထဲ…တားဆီးကြည့်မနေနဲ့”လို့ လေးဖြူဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းထဲကလိုကိုယ့်ရဲ့ “မျှော်လင့်ခြင်းလေးရေ”၊
“အချစ်ကိုမင်းနဲ့တွေ့မှသာတန်ဖိုးထား ချစ်တတ်တာ ယုံပါ”လို့ Rဇာနည်လိုပြောပြရင်း ရသ ရဲ့ “တစ်ခါတုန်းက”သီချင်းလို “ငါရေးတဲ့ဒီစာဟာ မင်းရယ်စရာကနေဖတ်နေ မှာလား..ဇာနည် ဆိုတဲ့ချာတိတ်....…ဒေး ရဲ့အသံကို ကြားယောင်နေမှာ… ..ခဏလောက်ဖြေပါ…ပြာနက်နက် အသားရောင်တွေကြား……..စီးပွားရှာပြီးပြန်လာတဲ့ ဘာကြောင့်ဒီကမလေးရှားပြန်တွေရဲ့
စကား နားယောင်နေမှာလဲ ” လို့ ဒေး ရေ…..။
ဒေး ရေ…ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကဗစ်တိုးရီးယားကိုပြောသလို၊အောင်အောင်ဦးကခင်ငြိမ်းချမ်းကိုပြောသလို၊တွမ်ခရုစ် ကကေတီဟုမ်းစ်
ကိုပြောသလို ၊လူမင်း ကခင်စံပယ်ဦးကိုပြောသလိုနင့်ကိုငါပြောချင်တယ် ဒေး ရယ်ကချင်လို“နမ့်ဖောခိုင်ဆောရအိုင်”၊ ရှမ်းလို
တော့ “ပီနန်းဟောင်အားစူး”၊ကရင်လိုတော့“ယယ်အဲနယ်”တဲ့ ၊ကိုရီးယားလို “ဆာဒါးနယ်ယော”၊ရုရှားလို“ယာလူးဗလူး
ဆီဗျာ”တဲ့ ၊တရုတ်လိုတော့“၀ါ အိုက်ညီ”၊အင်္ဂလိပ်လိုက“အိုင်လပ်ဗ်ယူ”တဲ့ ၊ ဒေး ရေ …ငါဗမာလိုပဲပြောမယ်ဟာ။နင့်ကိုငါ
ချစ်တယ် ဒေး ရယ်……တကယ်ပါ ။
“ပိုးအိစံ” ကတော့“အချစ်ဆိုတာရယူခြင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ” တဲ့၊“တာရာမင်းဝေ” ကတော့“အချစ်ဆိုတာ ဘုရား
သခင် မတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အရောင်”ဆိုပဲ ၊“ထွန်းအိန္ဒြာဗို”ကျတော့“အချစ်ဆိုသည်မှာ …အံ့သြမှု့များနဲ့ ဆန်းကြယ်သောအရာ”
လို့ပြောတယ် ၊အဲ…“အငဲ” က“အချစ်ဆိုတာဘုရားကပေးတဲ့ဆုလာဘ်အလား”တဲ့ ၊“စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်”ကတော့ ပြတ်တယ်
(စကား…စကား)၊“အချစ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့..definition တွေအကုန်လုံးမှား”တဲ့၊“အချစ်ဆိုတာ တွက်လို့မရတဲ့ပုစ္ဆာ” ဆိုပဲ ။ ကျွတ်…ကျွတ်…သနားလိုက်တာကွယ် ၊ခမျာ မသိရှာဘူးကိုး…၊ ဒီမှာ ဒေး ရေ…..ငါပြောပြမယ်ကွ ယောင်္ကျားမရမချင်းမှတ်ထား“အချစ်
ဆိုတာမလေးရှားသွားမယ့် ဗီဇာ”လို့ ။ (ဟာ့ ဇာနည် မင်းတော်လှချည်လား ဟ )။
နယ်တကာမှာ ၀ယ်သာ (weather)မကောင်းလို့ ရှိမဲ့စုမဲ့လေးကိုရောင်း ၊တပြည်တစ်ရွာကို လှစ်ဟပြေးသွားတဲ့ ခေတ္တ မလေးရှား
ဆိုတဲ့ငနဲတွေကိုအလေးထားပြီး နင့်ရဲ့အချစ်ကို ဈေးကစားချင်နေပြီလား ဒေး ရယ်…။ဒီလိုနဲ့ပဲမလေးရှားပြန်တွေရဲ့ အပြေးတ
အားမြန်တဲ့ ဆိုင်ကယ်လီဗာသံအောက်မှာ(၀ူး….၀ူး) ငါ့ရဲ့ဂီတာသံတွေ မရှု့မလှပျောက်ဆုံးပြီးလူလုံးမလှဖြစ်ရတော့မလား ဒေး
ရယ်(အဟင့်..)၃မိနစ်ပဲစောင့် လို့ပြောတဲ့ “အိန္ဒြာကျော်ဇင်”စတိုင်နဲ့ ၃နှစ်တည်းစောင့်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ နင့်စကားတွေက ၃နှစ်စာ ရင်းဂစ်လုပ်လို့အရင်းပြုတ်သွားပြီလား ဒေး ရယ် ……. ။ ( အဟတ်ဟတ် )
ဟိုး ငယ်ငယ်ကတည်းတ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ငါတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေကိုနင်ကမေ့ရက်နိုင် ပြီလား ဒေး ရယ်။ နင်မမှတ်မိတော့ဘူးလား?
တချိန်တုန်းကငါတို့ နှစ်ယောက်မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြီး“လုံး”ခဲ့တာတွေ ၊“မုန့်လုံးရေပေါ်” ကိုပြောတာပါ ။ ငါတို့နှစ်ယောက်
“ညိ”ခဲ့ကြတာတွေ ၊ဆီးပင်ပေါ်မှာ ဆီးသီးခူးရင်းနဲ့ လေ ။နောက်ပြီး နင်နဲ့ငါ အကြီးအကျယ်“မှား”ကြတုန်းကလဲ ( ဖိနပ်…ဖိနပ် ) ငါဗွေ မယူခဲ့ပါဘူး ဒေး ရယ် ။ နင့်ဘက်ကစည်းကျော် လာတာတောင်မှ ငါက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ကောင်ပါဟာ ။ထုပ်
စည်းထိုးတုန်းက ပြော တာပါ (အဟီး )။ ငါကနင့်ကို ဟိုး…ငယ်ငယ်လေး “ညအခါလသာသာ ၊ ကစားမလား နားမလား”
ကတည်း ကချစ်ခဲ့တာပါ ။ အခုနင် ကြီး လာတော့(အသက်…အသက် ) ငါက ပိုပြီးချစ်မိတာပေါ့ဟာ ။ ငယ်ကအကြွေး အနှစ်
တစ်ရာမဆပ်သာတဲ့ ( ဟာ မှားကုန်ပါပြီ) ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ မမေ့သာတဲ့ ၊ အဲဒါသာကြည့်တော့ ဒေး ရေ နင်နဲ့ပတ်သက်
လာရင် ငါ့မှာ အမှားမှားအယွင်းယွင်း နဲ့ဟိုမေ့ဒီမေ့ ဖြစ်နေပြီကွ ။ အင်းပေါ့လေ အချစ်တွေကလဲ ကြီးလာမှပဲ ကိုး။
ဒေး ရယ်…ငါက နင့်ကို ဟောလိဝုဒ် မင်းသားတွေလို သူရဲကောင်းဆန်ဆန် ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာ ငါလူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့
ဖိုက်တဲ့အခါ နင် ကိုးလိုးကန့်လန့်နဲ့လိုက်မလာနဲ့နော် ။ ကိုရီးယား မင်းသားတွေလို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်လဲ ချစ်တယ် ။နင့်မှာ
တော့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ် နဲ့ ကင်ဆာ မရှိရဘူးနော် ။ ဘောလိဝုဒ်မင်းသားတွေလိုကခုန်ပြီးတော့လဲ ချစ်တာပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျား
လေးတွေအများကြီးနဲ့ နင်တစ်ယောက်တည်း ဟိုပေါ်ဒီပေါ် မကရဘူးနော် ။ နောက်ပြီးတရုတ်မင်းသားတွေလိုလည်း ခုန်ပျံကျော်
လွှား ပြီးရင်တလှပ်လှပ် ဖြစ်အောင်လည်းချစ်သေးတာပဲ ၊ နင်ကတော့ ငါ့ထက် အတွင်းအားနဲ့ သိုင်းပညာအဆင့်မမြင့်ရဘူးပေါ့ဟာ ။
ဒီလိုပါပဲ ဒေးးရယ် ၊ ငါကနင့်ကို မြန်မာလိုလည်း ချစ်တယ် ၊ အင်္ဂလိပ်လိုလည်း လပ်ဗ် (love) တယ်၊ သင်္ချာလို “ပိုက်သာဂိုရပ်စ်
ရဲ့ သီအိုရီ” ၊“ဂေါက်စ် ”လော အရလည်း ချစ်တယ် ( ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး ) ၊ ဇီဝဗေဒ အရ“ပွင့်တည်းဝတ်မှုန်ကူးခြင်း”ထက်“ပွင့်ခြားဝတ်မှုန်ကူးခြင်း”ကိုကြိုက်လို့လည်း နင့်ကိုငါချစ်တယ် (ကြောက် စရာကြီး)“ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်ခုနဲ့အောက်ဆီဂျင်
အက်တမ်၁ခုပေါင်း”ရင်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဓာတုဗေဒ ပုံသေနည်း အရလည်းချစ်တယ် ။ ရူပဗေဒ က“အိုင်စတိုင်းရဲ့ ရီလေတီဗ
တီသီအိုရီ”၊ “စွမ်းအင် တည်မြဲမှု့နိယာမ” အရလည်းချစ်တယ် ဒေး ရယ် ….(ရည်းစားစာရေးနေတာလား ကျူရှင် သင်နေတာ
လား ?)။ နောက်ပြီးနင့်ကိုငါကသမိုင်းကြောင်း အရလည်းချစ်တယ် (ငါ့အဖေကနင့်အမေကိုငယ်ငယ်က ရည်းစားစာ ပေးဖူးတယ်
ဆိုပဲ ၊ အမေတုန်းက မိုက်ပြီးပြီ၊သမီးအလှည့်ကျမှ တော့ ထပ် မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့တော့ ဒေး ရယ်…)သွပ်..သွပ်…သွပ် ။
ပထ၀ီ သဘောအရလည်း ချစ်သေးတာပဲ၊ ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ ယောင်္ကျားမရသေးတဲ့ အပျိုဆိုလို့နင်ပဲ ကျန်တော့တာကိုး ၊ အဲဒါ
ကြောင့် နင့်အမေကြီးက ထောင်နေတာ(လက်မ….လက်မ)။စီးပွားရေး အရလည်းချစ်တယ်ဟာ(အဟီး ဒါကအရေကြီးတယ်ဟ)
လူမှု့ရေးအရလည်း ချစ်တာပါပဲ ဒေး ရယ် ။ နင့်အဖေနဲ့ ငါနဲ့ကဘောလုံးပွဲလောင်းဖော် လောင်းဖက် အရင်းကြီးတွေ ဟ (မျက်နှာပျက်မှာစိုး လို့ပါ ဟာ) ။ဒါပေမယ့် ယမင်းရယ်….နင့်အမေကြီးက အချစ်အကြာင်းကို မြန်မာလိုလည်းနားမလည်၊အင်္ဂလိပ်လို
လည်း မသိပဲထုတ်လိုက်တဲ့ နင့်အမေရဲ့သားမက်ရွေးနည်းပုံသေနည်းကို ၁၀ တန်းမှာ သင်္ချာအမှတ် ၄၀ ရ အောင်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ငါ
ဒေး ရယ် မန်ယူ အသင်းရှုံးတာ (ဟုတ်ပါဘူး) ရောမအင်ပါယာကြီး ပျက်စီးတာနင့်ကြောင့်မဟုတ်သလို WTC ပြိုကျတာလည်း
ငါနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးဟာ။နောက်ပြီး ထရိုင် (TRI) ပြဲသွားတာ (ဟာ..ဟုတ်သေးပါဘူး )ထရွိုင်(TROY)မြို့ကြီးပျက်စီးတာ
လည်းနင့်ကြောင့်မဟုတ်သလို အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာကငါစခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ဒေး ရယ် ၊ အေး….ဒီလိုပါပဲဟာ ဆူနာမီ
ငလျှင်ဟာငါ့နှလုံးခုန်သံကြောင့် မဟုတ်သလို ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာ ကလည်းနင်တို့အိမ်က လေပန်ကာ ပျက်နေလို့ မဟုတ်ပါ
အဲဒီတော့“ငါသိပ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းမလှလေးရေ ”နင့်အမေဆိုတဲ့ မတော်ရသေးတဲ့ငါယောက္ခမကြီးကို ပြောလိုက် စမ်းပါကွာ၊ “ဟိုအသုံးမကျတဲ့ဝက်လိုကောင်”တွေကို“အခွင့်အရေးတွေ ပေးမနေပါနဲ့တော့”လို့ “အတင့်ရဲ လိုက်တာ”(အတင့်ကို ရဲ
လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော် ) “ဒီလိုကိစ္စမျိုးတကယ်ရှိသလား ဆိုတာကတော့ ဘုရားရှင်မှပဲ သိမှာ”၊ ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါက “အားနာမနေတော့ဘူး”လို့ငါ့ရဲ့အချစ်ကို “မိုးနတ် မင်းကြီးသိပါတယ်”နင့်အမေကိုလည်း“မိုးနတ်မင်းကြီးကောင်းချီးပေး
ပါစေ လို့ ဆုတောင်းတယ်ပြော လိုက်ပါကွာ”…….။
ဒေး ရေ….အခုဆို ဘီလ်ဂိတ်က မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ်ပဏီ ကြီးပိုင်သလို၊ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း သက်ဆင် ရှီနာဝပ်ထ က
မန်စီးတီးကလပ်အသင်းပိုင်သလို ၊ မိုဟာမက် ယူနွတ်က ဘဏ်လုပ်ငန်း ပိုင်သလို ၊ငါကလည်းမကြာခင်(အဟီး)မလေးရှား
သွားခွင့် ဗီဇာ ပိုင်တော့မှာပါဟ ၊ (အဟီး ဟီးနှိုင်းရက်လိုက်တာ )။ သမီးတစ်ကောင်ကို မလေးရှား ပြန်တွေနဲ့ ဈေးကစားဖို့
ကြံနေတဲ့ နင့်အမေရယ် ၊ ၀မ်းတူးဖိုက် (125) လီဗာသံကြားရင်ရင်ခုန်သံမြန်မြန် သွားတယ်ဆိုတဲံ့ နင်ရယ် ၊ ၀ယ်စားရတဲ့ ဆန်
ကုန်ပြီးထမ်းခမပေးရတဲ့ မြေကြီးက လေးနေပြီလို့ပြောလာတဲ့ နင့်ယောက္ခမလောင်းကြီး(အဟီး)ငါ့အမေက ပြောလာတာတွေ
ရယ် ကြောင့်ငါ့မှာ ငါ့ရဲ့ တစ်ရာ့ကိုး ၊တစ်ရာ့တစ်ဆယ် (၁၀၉/၁၁၀)ဆိုတဲ့ ဘ၀ကိုရောင်းပြီး မလေးရှား ကိုဂျောင်းရတော့မယ်ကွဲ့
ဒေး ရဲ့ ၊နင်ဝမ်းသာလိုက်စမ်းပါကွာ( ဟရူး ဟရူးလို့အော်ပြီးတော့ပေါ့ )့အဟတ်ဟတ် ။
နင့်အမေရဲ့ သားမက်ရွေး ချယ်ရေးလောကထဲကို ဗီဇာ တစ်မျက်နှာ တစ်ရွာမှတ်လို့ခြေစုံ ပစ်ဝင်ခဲ့ပြီ ဒေး ရေ…။ငါ့ရဲ့ ဗီဇာ
ဟာ နင့်အမေအတွက်တော့ သိန်း ၅၀၀ထီ ၊ ဒါမှမဟုတ် မို့မို့မြင့်အောင် ၀တ်တဲ့ ပါတိတ် ဖြစ်နိုင်သလို ၊ငါ့ရဲ့ဗီဇာဟာ နင့်အတွက်
တော့ ၀မ်းတူးဖိုက် ၊ အာစတပ် ဒါမှမဟုတ်ထက်ထက်မိုးဦးကြော်ငြာ တဲ့ရွေဆိုင်က ဆွဲကြိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ ၊အေးအဲဒီလိုပဲ
ငါ့ရဲ့ ဗီဇာဟာ နင့်အဖေ အတွက်တော့ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ လာလီဂါ ၊စီးရီးအေ ဒါမှမဟုတ်ဘွန်ဒက်လီဂါ ၆ သင်းမောင်းလည်းဖြစ်
နိုင်တာပဲ ။အဲဒီတော့ ဒေး ရယ် ၊ဟိုး ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကစပြီး နင်နဲ့ငါကြား မှာအတူလုံးခဲ့(မုန့်လုံးရေပေါ်)၊ ညိခဲ့ (ဆူးကိုင်းမှာ ) ၊ အကြီးအကျယ် မှားခဲ့(ဖိနပ် ) ကြတာတွေ ၊နင်တို့အိမ်အတွက်ငါကုန်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဆီဖိုးတွေရဲ့မျက်နှာကို မထောက်ရင် နေပါ ဒေး ရယ် ၊ငါ့ရဲ့ဒီမလေးရှားသွားမယ့်ဗီဇာလေးရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ပြီးတော့ နင့်အမေကြီးစိတ်ချမ်းသာ
အောင် ငါ့ကိုပြန်ချစ်လိုက်ပါ ဒေး ရယ်၊ပြည်တပါးကို သွားမယ့်ငါ့ကိုအသွားမဖြောင့်အောင် မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ဒေး ရယ် ၊ နင့်ရဲ့
အချစ် တစ်မတ် ( ဟာ… ဟုတ်ပါဘူး ) ၁၅၀၀ ကို ငါ့ရင်ဘတ်ထဲထည့်ပြီး မလေးရှားကိုအသွားဖြောင့်ပါရစေလား ဒေး ရယ် နော်….
နော် .လို့ ……။ ။
နင့်အချစ် ၁၅၀၀ ကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ပြီး မလေးရှားကို အသွားဖြောင့်ချင်တဲ့-
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, April 18, 2009 in music ကဏ္ဍ
တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော် အခွေထွက်တော့မယ့် Rဇာနည်
တစ်ကိုယ်တော်ခွေ မကြာမီ ထွက်ရှိတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် Rဇာနည်နဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စာစောင်လေး
Q:အစ်ကိုရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ် အသစ် အမည်လေး သိပါရစေ။
Ans:ကျွန်တော်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေသစ် နာမည်က အဆိပ်တက် အိမ်မက် လို့ နာမည် ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့
တတိယ တစ်ကိုယ်တော် အခွေပါ။
Q:ဘယ်သူတွေ တီးပေးထားလဲ၊ တေးရေး တွေကရော ဘယ်သူတွေ ပါဦးမလဲ။
Ans:Iron Cross Band က တီးပေးထားပြီး PTL စတူဒီယိုမှာ အသံသွင်းထားပါတယ်။ တေးရေး ဆရာတွေ ကတော့ ကေအေတီ၊
အငဲ၊ R-ခိုင်၊ စောခူဆဲ၊ ဖိုးကာ၊ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ Dယံ- မင်းမော်ကွန်း၊ လင်းလင်း(Ns)၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေလဲပါတယ်။
Q:သီချင်းတွေက ဘာအမျိုးအစားတွေလဲ၊ ဘယ်တော့လောက် ထွက်မယ်လို့ မှန်းထားလဲ။
Ans:သီချင်း အားလုံးက ကော်ပီ အမျိုးအစားတွေ ချည်းပါပဲ။ ဖေဖော်ဝါရီလ လောက် ထွက်မယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။
Q:အခုဒီအခွေမှာ ပါတဲ့ တေးရေးတွေက အစ်ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ထားတာလား။
Ans:ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် စိတ်ကြိုက်ပါပဲ။
Q:"အဆိပ်တက် အိပ်မက်" ဆိုတာ ဘယ်သူရေးတဲ့ သီချင်းလဲ။
Ans:အဲဒါက မင်းမော်ကွန်း ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ကျွန်တော် ကြိုက်လို့ စီးရီး title ပေးဖြစ်သွားတာပါ။
Q:အခု လောလောဆယ် ပြည်ပက ဘယ် Rcok သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်နေလဲ။
Ans:အင်း အခု လောလောဆယ်တော့ Nickelback, click five, Keane, Coldplay, ပြည်တွင်းမှာ ကျတော့ ကိုလေးဖြူ၊
မာရဇ္ဇ တို့ အခွေတွေ နားထောင် ဖြစ်ပါတယ်။
Q:အခု ကိုယ်ပိုင် Band တွေ ပေါ်လာတဲ့ အပေါ်မှာရော အစ်ကို ဘက်က ဘယ်လိုမြင်လဲ အစ်ကို အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်
Band ဖွဲ့ချင်တဲ့ စိတ်ကူးရှိလား။
Ans:ကိုယ်ပိုင် Band တွေနဲ့ဆို လာကြတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် Band ဖွဲ့ဖို့ စိတ်ကူး
တော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် Band အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဆိုသွားချင်ပါတယ်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, April 17, 2009 in မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်များ
ကျွန်တော်တို့မိသားစုတတွေမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာအထင်ကရရှိနေတဲ့ဘုရားအစုံကိုဒီစေတီလေးအတွင်းကနေပဲအားရပါးရ ဖူးမျှော်ခွင့်ရလိုက်ကြတယ်လေ့ပုံစံငယ်လေးတွေပါ။လူတွေများနေတာကတစ်ကြောင်းမှန်ကာထားတာကတစ်ကြောင်းဆို တော့ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်။သည်းခံပြီးကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောပါရစေခင်ဗျာ့
လာပြီ့ဟီး။လှေစီးခ ကတစ်နာရီးကိုတရုတ်ငွေယွမ် ၅၀တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နာရီခွဲလောက်ရေထဲမှာအချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြတယ်။ဒီဖက်ကပုံ
ဖုန်းပါပဲ 15924646814 တဲ့ရောက်လာခဲ့ရင်သာဆက်သွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အော့်ပြောရအုံးမယ့်ကျွန်တော်တို့မြို့လေးကိုတော့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, April 16, 2009 in သားသမီးတွေရဲ့မိဘ
ပစ်လိုက်တယ်။အခုဆိုတစ်နေကုန် က ထားလို့ခြေတွေလက်တွေလည်းလှုပ်တောင်မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။ဒီအတိုင်းဆိုရင်
တော့ကျွန်တော်သိပ်မကဲရဲပါဘူး။ဒီနေ့တော့သယ်ရင်းတစ်ယောက်က SPY အတင်းလာတိုက်သွားတာနဲ့ တစ်လုံးနဲ့
၇ ယောက် ၈ ယောက်လောက်တော့ရှိ်မယ်ဗျ။ကွေးနေအောင်ကနေကြတာလေ့အဲ့သီချင်း၂ပုဒ်၃ပုဒ်လောက်လဲ
ဆွေမျိုးမိဘ တွေကလာခေါ်သူကခေါ် မိန်းမရှိသူတွေကတော့မိန်းမ ကလာခေါ်သွားကြနဲ့အကုန်းလုံးနီးပါးပြန်ကုန်ကြ
ထက်သားကတစ်လကြီးလို့မှမရပဲ။ကလေးကအလွန်ဆုံးရှိမှ ၇ နှစ်လောက်ပေါ့့။
အောင်ဘယ်လိုများခေါ်မလဲလို့ပေါ့။ကျွန်တော့်ရဲ့ဘေးမှာသီချင်းဆိုတာကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကတော့အဲဒီ က နေတဲ့လူ
အားပေးလိုက် ၊ အရှေ့ကနေသူ့အဖေကတဲ့အတိုင်းလိုက်ကလိုက်နဲ့ စင်အောက်မှာသားအဖနှစ်ယောက်အတိုင်အဖောက်
သွားမိတယ်။သူ့ဟာသူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသူ့အဖေလိုလိုက် ကက ဖအေတူသားဆိုပြီးကဲ့ရဲ့နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာ
သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့အဖေရဲ့လုပ်ရပ်ဟာမကောင်းမှန်းသိနေပေမဲ့ သူ့အဖေဖက်ကနေသူရပ်တည်ပေးနေတယ်လေ။တစ်လော
မှာသူ့အဖေဟာ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့အောင်ပွဲခံရင်း ကွေးနေအောင်ကနေဆဲပဲပေါ့့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, April 13, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
mail box ရှင်းလင်းရေ့းလမ်းညွှန်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, April 11, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
တပ်ပြီးတော့ကဏ္ဍအလိုက်အုပ်စုခွဲထားတတ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပါပဲ gamil မှာလဲ label လေးတွေတပ်ပြီးကဏ္ဍလေးတွေ
ခွဲခြားထားလို့ရပါတယ်။တစ်ချို့တွေက ပြောကြပါတယ်။ မေလ်းတွေ အရမ်းများတော့ ရောကုန်တယ်တဲ့။ဘယ်ဟာက
ဘယ်သူပို့တာမှန်း မသိတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်အမြဲတမ်း mail စစ်ဖို့မအားလပ်တတ်ကြတဲ့သယ်ရင်းများအနေနဲ့က
တော့ဘယ်သူက forward လုပ်ပြီးပို့လိုက်မှန်းမသိတော့အောင်ရှုပ်ထွေးသွားတတ်ကြပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကတော့မပူ
ကြပါနဲ့တော့သယ်ရင်းအပေါင်းတို့ရေ့ အဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့ Mr-ဇာနည် လာပါပြီခင်ဗျာ။ဖြေရှင်းဖို့ကတော့
အခု အဲဒီ ပြဿနာလေးကို Filter လေးစစ်ထုတ်ပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်နော်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ Label တခု အရင်တည်ဆောက်ကြရအောင်............
chat box ရဲ့  အောက်နားလေးမှာ Label အတွက် နေရာလေးရှိပါတယ်။
အဲဒီထဲကနေ Edit Labels ဆိုတာလေးကို နှိပ်ရမှာပါ။
Edit Labels ထဲရောက်သွားပီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ့။(ဥပမာ-phyozarni13)
ပြီးရင်တော့ create ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ Label နေရာလေးမှာ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ နာမည်လေးပေါ်လာပါလိ့မ်မယ်။(ဥပမာ-phyozarni13)
ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ Filter လုပ်ကြရအောင်.....
ကိုယ့် inbox ထဲမှာ ကိုယ်Filter လုပ်ချင်တဲ့ အီးမေးကို select လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် more action ထဲမှာ Filter message like this ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပါ။
Filter Dialog box ကျလာပါလိမ့်မယ်။Has the Words: ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ကိုယ်စစ်ထုတ်ချင်တဲ့ အီးမေး လေး
ပါလာပါလိမ့်မယ်။ပြီးလျှင်တော့ Next Step ကို နှိပ်ပေးပါ။
နောက်ကျလာမယ့် Filter Create Page မှာတော့ skip the inbox ကို check mark လုပ်ပေးရပါမယ်။
(ကိုယ့် inbox ထဲကို အ၀င်မခံလိုတဲ့အတွက်ပါ)
နောက်တခုက Apply the Label ကို check mark ပေးပြီး နဘေးက choose label မှာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ label ကို
ပြီးရင်တော့ Create Filter ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
(ရှိပြီးသား* ဥပမာ-phyozarni13 ပို့ထားတဲ့ Email*အရင်mailအဟောင်းတွေကိုပါ Label Applyထဲမှာပါသွားစေချင်
ရင်တော့ Also Apply Filter to.... ကိုပါ check mark လုပ်ပေးပါ)။
အပေါ်ကအဆင့်တွေ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့.. Label တခုထဲကို ကိုယ့်စီဝင်လာတဲ့အီးမေးတွေကို Filter စစ်ထုတ်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ ဥပမာ.. Label ကို phyozarni13 လို့နာမည်ပေးထားပြီး။ phyozarni13 က ပို့တဲ့အီးမေးတွေ အားလုံး
အဲဒီ Label ထဲကို အလိုအလျှောက်ရောက်ရှိသွားမှာပါ။
Attachment File တွေမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား........။
ဒီအဆင့်တွေပြီးသွားရင်တော့ ဥပမာ-phyozarni13 ပို့ထားတဲ့ mail တွေဟာ inbox ထဲကိုမသွားတော့ပဲ labelထဲကို
ပဲတန်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ့်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ chat box ရဲ့  အောက်နားလေးက Label အတွက်
နေရာကလေးမှာ စောစောကနာမည်ပေးထားတဲ့ phyozarni13 လေးထဲမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ့်
labelကအရေအတွက် အကန့်အသက်မရှိ အောင် အတိုင်းအထက်အလွန် ပေးထားလဲကိစ္စမရှိပါဘူး။ကြိုက်သလောက်
ဒီလိုဆိုတော့လဲသယ်ရင်းတို့mail box ကလေးကရှင်းလင်းသွားပြီဟုတ့်ဟဲဟဲ့သယ်ရင်းတို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပဲ
ကျွန်တော် ဇာနည် ကတော့အရမ်းဝမ်းသာလှပါပြီ့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, April 10, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
အချစ်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရန် ဘာသာစကားလိုမည် မထင်ပါ ၊၊
ရာဇဝင် တွင်ခဲ့သည် ၊၊
ထို့ထက်ပို၍ . . .
အနာဂတ်ပေါင်းများစွာအထိ တွင်ကျန်ကျော်ကြားနေဦးမည်ဖြစ်သည် ၊၊
စာလုံးအမျိုးမျိုးပေါင်း၍ ချစ်ခဲ့ကြသည် ၊၊
အသံအမျိုးမျိုးထွက်၍ ချစ်ကြသည် ၊၊
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ . . .
လေစိမ်းတို့ မှိတ်ငြိမ်းထားရာ အရပ်ကို အချစ်ဟုခေါ်ဆိုချင်သည် ၊၊
“ သူ့မျက်ဝန်း တွေကိုချစ်တယ်”
ဒီ အလင်္ကာလေးပဲ စီရီဖြန့်ကျက်၍ ဘာနဲ့မှ မနှိုင်းပဲချစ်သည် ၊၊
ဖန်ဆင်းရှင် အမျိုးမျိုးတို့ ဖန်ဆင်းဖူးသော သက်ရှိတို့၏ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ၊၊
ချစ်သူသည် ချစ်မိသူတို့အတွက်တော့ အရာအားလုံးဖြစ်သည် ၊၊
ပြတင်းပေါက် အနီလေး ဖြစ်သည် ၊၊
ပန်းပွင့် အညိုလေး ဖြစ်သည် ၊၊
ကမ်းခြေ အစိမ်းလေး ဖြစ်သည် ၊၊
တောတန်း အပြာလေး ဖြစ်သည် ၊၊
ဘယ် ချစ်မိသူကမှ ချစ်သူ၏ ပုံရိပ်အား အဆိပ်သုတ်၍ရေးဆွဲမည် မထင်ပါ ၊၊
ချစ်သူ သည် ဖန်ဆင်းရှင် မသိသော ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်သည် ၊၊
တစ်ချိန်က ဖန်ဆင်းခဲ့ကြဖူးသည် ၊၊
ယခု. . . ဖန်ဆင်းနေကြသည် ၊၊
နောင် ဖန်ဆင်းနေကြမည် ဖြစ်သည် ၊၊
“ ချစ်သူ (မျက်ဝန်းလေး) သာ လိုအပ်မည်ဆိုလျှင် သံလိုက်အိမ်မြောင်လေး
ထံမှ မြောက်အရပ်လေးအားခူး၍ ထွန်းလင်းပန်ဆင်ပေးချင်ပါသည် ”
ကမ္ဘာကြီး ၏ စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ရာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည် ၊၊
ဖြစ်ချင်တိုင်းသာ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သည် ရှိသော် လည်ပတ်နေသော ကမ္ဘာကြီးထံမှ ထို
အိမ်ပြန်ချိန် များအား ဖောက်ထုတ်ပစ်ချင်ပါသည် ၊၊
အိမ်ပြန်ချိန် များအားမုန်းသည် ၊၊
ဝေးကွာနေသည် ထင်လျှင် လေထုတစ်ဝန်းလုံးအား ဖျောက်ဖျက်၍ ကောင်းကင် နှင့်
မြေကြီး အား နီးစပ်ခွင့်ရစေချင် မိသည် ၊၊
ချစ်သူတို့ ရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေကို ဖဲ့ထုတ် ပစ်လိုက်ပါအုံး ” ၊၊ ၊၊
အချစ်ကို ဖန်ဆင်းကြသူတို့ ၏ ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုဖြစ်သည် ၊၊
လွမ်း ဖူး ကြ သည် ၊၊
လွမ်း နေ ကြ သည် ၊၊
ဆွတ် ပျံ့ သိမ် မွေ့ စွာ လွမ်း သည် ၊၊
သီ ချင်း တွေ ခူး ရင်း လွမ်း သည် ၊၊
ကြယ် တွေ ကို မှိတ် ၍ လွမ်း သည် ၊၊
က ဗျာ တွေ ကို ခြွေ ၍ လွမ်း သည် ၊၊
“ မျက်ဝန်းလေး ရေ…
ဆက်ဝေးစရာ ကမ္ဘာကြီး ကုန်သွားပါဦးတော့ . . .
တစ်သက် နဲ့ တစ်ကိုယ် လွမ်းသွားပါ့မယ် ၊၊ ၊၊ ”
ထီးတစ်ချောင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂)
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, April 08, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
တယ်။အဲဒီကောင်လေးနာမည်က ဇာနည် တဲ့။သူကမျက်ရည်တွေကိုမုန်းတယ်။မိုးစက်တွေနဲ့အတူမျက်
တွေ့နေကျ ဇာနည် မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်သံသယဖြစ်ချင်စရာပါပဲ။ကြည့်လိုက်ရင်သူဟာ ဇာနည် ဆို
ကျွန်တော်တိုက်ပေါ်ကနေကြည့်နေတာဟာ ဇာနည် ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီလမ်းလေးထဲကိုစပြီးဝင်လာ
သူ့ကိုသိပ်ချစ်ရှာတဲ့သူ့ချစ်သူလေး ဒေး ကတော့သူ့ဖိနပ်လေးကိုကိုင်ပြီး ဇာနည် ဇာနည် ဆိုပြီးတတွတ်
ကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့သြသွားမိတယ်။ဇာနည် ဒေး ကိုသိပ်ချစ်တာကျွန်တော်အသိဆုံးပဲလေ။
အရာရာတိုင်းကို ဒေး အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ဇာနည် ဟာအခုတော့မိုးရေတွေထဲမှာ ဒေး တစ်
တွေကိုကျွန်တော်အပ်ကျတာကစသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ ဇာနည် ဘာကြောင့်ဒီလိုကြီးထူးဆန်း
ဟုတ်တယ် ဇာနည် ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာအကြောင်းစုံသိရအောင်ကျွန်တော် သွား
မေးမှဖြစ်တော့မယ်။ဇာနည် လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရနိုင်တာပဲလေ။ဇာနည့် ကိုကူညီ
ရောက်တာထီးတစ်ချောင်းကိုကောက်ဆွဲပြီးတော်တော်အလှမ်းဝေးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဇာနည် တို့နောက်ကို
အနီရောင်ချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ဇာနည့် ကိုအရမ်းခင်တာကိုးးးးးးးးးးးးးးး
လိုက်သေးတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ဝေဝါးနေတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာ ဇာနည် တို့နှစ်ယောက်ဟာလမ်းတစ်ဖက်က်ိုချိုး
သွေးတွေလား မိုးရေတွေလားသေချာအောင်ခွဲခြားလို့မရနိုင်တော့တဲ့ အိုင်ငယ်လေးထဲမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့့
ထီးတစ်ချောင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၁) ကိုပြန်လည်အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ လေးကနေလာခဲ့ပါနော့်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, April 07, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာတစ်ပါးစီ၏ မြန်မာပြန်အကျဉ်း
၁။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မင်္ဂလာ (၃) ပါး
၂။ နေရေးထိုင်ရေး မင်္ဂလာ (၃) ပါး
၃။သင်ကြားရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၄။ပြုစုရေး မင်္ဂလာ (၃)ပါး
၅။လိုက်နာကျင့်သုံးရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၆။ရှောင်ကြဉ်ရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၇။စိတ်ထားရေး မင်္ဂလာ (၅) ပါး
၈။သည်းခံရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၉။ခြိုးခြံရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၁၀။စိတ်ထားခိုင်ခံရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု သင်ခန်းစာမှ ပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာလေးတွေလို့သိရပါတယ့်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Sunday, April 05, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
ဓမ္မရဲ့ အရသာ သိသူတွေကတော့ မြန်မာစာမတတ်ဘဲနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတောင် ဖြစ်ကုန်ကြပြီ မြန်မာရဟန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ စာပေတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေဖတ်ပြီး လူတကာဖတ်စေချင်လို့ ပြန်ညွှန်းနေကြပြီ။ ရဲ့ ဟောတရားကို ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေများစွာက မြန်မာဘာသာနဲ့ စာတွေပေတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရေးခဲ့ကြတာတောင် မြန်မာပြည်ဖွား ညီနောင်အ
- ဘုရားဟော မူရင်းဟုတ်ပါ့မလား၊
- ဗုဒ္ဓက ဘာကျမ်းဂန်တွေများ ထားခဲ့လို့လဲ၊
- လေးသင်္ချေကမ္ဘာတသိန်းကို ဘယ်သူသက်သေပြနိုင်လို့လဲ၊ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး ဓမ္မအရသာ ဝေးနေကြတယ်။ ဘယ်သူမှ အတည်ပြုမပေးနိုင်တော့တဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ အချိန်မကုန်ကြစေဖို့ သတိပေးပါရစေ။
လေးသင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်းဆိုတာကို မယုံကြည်နိုင်ရင် ပုံပြင်လို့ သဘောထားလိုက်ကြပါ။ အဲဒီဇာတက ဆိုတဲ့ ကျမ်းဂန်ကို
လေ့လာကြည့်ရင် အဓိကအားဖြင့် ချီးမြှောက်ထားတဲ့ ကျင့်စဉ်က ပါရမီ ၁၀-ပါး ကျင့်စဉ်တရားပါ။ ဘဝနေထိုင်ရေး မူဝါဒအ
နေနဲ့ အဓိကပေးသွားတာက စရိယာ ၃-ပါး အကျိုးမျှော်တရားပါ။
ပါရမီ ၁၀-ပါးဟာ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူငြင်းနိုင်သလဲ။ စရိယာ ၃-ပါးဟာ ပြည့်စုံတဲ့ အတွေး
အခေါ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူငြင်းနိုင်လဲ။ အဲဒီထက် ပိုမိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ လမ်းစဉ်တရားတွေ၊ ပြည့်စုံတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအ
ဆတွေ ပိဋကစာပေ ပြင်ပမှာ ရှိပါသလား။ ဘိုင်ဘယ်မှာ ရှိပါသလား၊ ကုရ်အာန်မှာ ရှိပါသလား။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အဘိ
ဓမ္မာကြီးတွေကို မပြောသေးဘူးနော် အလောင်းတော်ဘဝက ကျင့်စဉ်တရားနဲ့ အတွေးအခေါ်လေးပဲ ချပြထားတယ်။ အခြား
ကျမ်းမှာ အဲဒီလောက် အဆင့်မြင့်မြင့် ကျွန်တော်ကတော့ မတွေ့ဖူးဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် မခံယူရင်တောင် ဒီကျင့်စဉ်၊ ဒီအတွေးအခေါ်တွေဟာ လောကအကျိုးပြုတဲ့ တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သာမာန်အတွေးအခေါ်ရှိရင် လူတိုင်းသိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီကျင့်စဉ်တွေအတွက် ပိဋကကို ဂုဏ်ယူတယ်။ ပိဋက
ကို ယှဉ်ရဲတဲ့ ကျမ်းရှိရင် ယူခဲ့ကြ။ အဲဒီကျမ်းကို လေးစားစွာ ဦးထိပ်ပန်ဆင်ထားလိုက်မယ်။ အဲဒီကျမ်းပြုသူကို တစ်သက်စာ ဆရာတင်လိုက်မယ်။ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတသိန်းဆိုပြီး ကိန်းဂဏန်းအတွက် သိပ်ပြီး ကဲ့ရဲ့ချင်သူတွေအတွက် အဲဒီဇာတက တွေကပေးတဲ့ ပါရမီ ၁၀-ပါး ကျင့်စဉ်တရားကို ချရေး ပြလိုက်တယ်။ ဘယ်စာပေဖတ်ဖတ် အနှစ်သာရကို ရှာတတ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
၁. ဒါန ပါရမီ= ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒါန်းမှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၂. သီလ ပါရမီ= သီလစောင့်ထိန်းမှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၃. နိက္ခမ ပါရမီ= ကာမဂုဏ်မှ ထွက်မြောက်မှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၄. ပညာ ပါရမီ= ဉာဏ်ပညာတိုးပွါး ရင့်ကျက်မှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၅. ဝီရိယ ပါရမီ= ဇွဲလုံ့လ စွမ်းပကားကြီးမားရန် ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၆. ခန္တီ ပါရမီ= သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၇. သစ္စာ ပါရမီ= အမှန်အတိုင်းပြော၍ ပြောသည်အတိုင်း ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၈. အဓိဋ္ဌာန ပါရမီ= စိတ်ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း ခိုင်မြဲစွာလိုက်နာ ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၉. မေတ္တာ ပါရမီ= သူတပါးအကျိုးစီးပွါး လိုလားမှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
၁၀. ဥပေက္ခာ ပါရမီ= ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းမရှိ ကောင်းဆိုးနှစ်တန် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
ငါသည်ဘုရားဖြစ်လေသည်၊ ငါသည် တမန်တော်ဖြစ်လေသည်၊ ငါသည် ပရော်ဖတ်ဖြစ်လေသည်၊ ဤကျမ်းသည်
ထာဝရ ဘုရားသခင်ပို့ချသော ကျမ်းဖြစ်သည်၊ ဤကျမ်းသည် ကောင်းကင်ကျကျမ်းဖြစ်သည်- ဆိုတဲ့ စကားလေး
တွေနဲ့ ကြည်နူးနေရင်တော့ လူပြောသူပြော ယုံကြည်နေတယ်ပြောရမယ်။ ဘုရားမကလို့ ဘယ်သူပို့ချတဲ့ ကျမ်းပဲဖြစ်
ပါစေ၊ ကောင်းကင်ကျမကလို့ ကောင်းကင်မှာ တည်နေတဲ့ ကျမ်းဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါစေ အဲဒီကိစ္စအထူး မငြင်းချင်ဘူး။ ငြိမ်း
ချမ်းတဲ့ ကျင့်စဉ်တွေပါရင်၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပါရင် အဲဒီကျမ်းဂန်ဟာ ကောင်းတယ်၊ အဲဒါတွေမပါရင်
ညံ့တယ်- ဒီလိုပဲ ပြောသင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် မိတ်ဆွေအားလုံးကို ဗုဒ္ဓစာပေပြင်ပကနေ ဖော်ပြပါ ပါရမီ ၁၀-ပါးနဲ့
ယှဉ်နိုင်တဲ့ ကျင့်စဉ်တရားရှိရင် ထုတ်ဖော်ပြကြပါလို့ ပြောပါရစေ။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, April 04, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
ကျွန်တော် သူ့ကိုချစ်မိနေလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်တယ်ဗျာ။ အဲဒါကို ဒီကောင်ကြီးက
“မလုပ်နဲ့ အဲဒါ ကြိုတင်ကြံစည်မှု” တဲ့၊
အဲဒါကြောင့် သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါ စာလိုက်ပေးမယ် ပြောပြန်တော့ သကောင့်သားက
“မလုပ်နဲ့ အဲဒါ ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု” တဲ့ဗျာ။
“အိုကွာ ဒါဆိုရင် သူမြင်သာအောင် သူ့အိမ်ရှေ့ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လုပ်မယ်ကွာ”၊
“ဟကောင်ရ အဲဒါ မသင်္ကာမှုနဲ့ ငြိမယ်ကွ မလုပ်နဲ့” တဲ့၊
“ဟာ ဒါဆိုရင်တော့ ဂစ်တာလေးတီးပြီးတော့ သူသိအောင် လုပ်ပါရစေကွာ”၊
“သြော် မင်းက ဆူပူသောင်းကျန်းမှုနဲ့ ငြိချင် နေပြီထင်တယ်” တဲ့၊
လုပ်ပြန်ပြီဗျာ၊ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲ။
“ကျွန်တော်ချစ်တာကို သူမသိနိုင်ရင် နေပါစေတော့၊ ချောင်ကွယ်တနေရာကနေပဲ ငေးတော့မယ်ကွာ၊ ကိုယ်ချစ်နေရရင် ပြီးတာပါပဲလေ”၊
“ဟာ မင်းကလဲကွာ မှောင်ရိပ်ခိုမှုတွေ ဘာတွေနဲ့ ငြိနေဦးမယ်နော်၊ ကြည့်လုပ် ကြည့်လုပ်”၊
“ဟ မင်းဟာက အမှုတွေ များလှချည်လား၊ တော်ပြီကွာ မချစ်တော့ဘူး”၊
“ဟေ့ ဟေ့ မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့ အဲဒါမှ ထိန်ချန်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက် ငြိသွားမယ်” တဲ့။
ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဗျာ၊ ကျွန်တော်လဲ မကြံတတ်တော့ဘူး၊ စဉ်းစားပေးကြပါဦး။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, April 03, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
အရင်လို ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူကို… အရာရာကို ကြောက်တတ်တဲ့ အမြဲသိမ်ငယ်နေတတ်တဲ့… တစ်ယောက်တည်း မနေ
ရဲတဲ့… အလိုလိုနေရင် အားငယ်စွာငိုနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော် လက်ကိုဆွဲ ကျွန်တော်နောက်မှာကွယ်ပြီး လောကကြီးကိုရင်
မဆိုင်ရဲတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တော့ ပြန်မဖြစ်စေချင် … သူ့ရင်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အတွက် နေရာတွေလုံလောက်စွာ
ပေးနိုင်တဲ့.. ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်မယ် ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ဖြူစင်တဲ့ ချစ်စရာအပြုံးပိုင်
ရှင်ကောင်မလေး တစ်ယောက်တော့ ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်…. အတိတ်ဆိုတာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အရာ ပြင်မရနိုင်တော့တဲ့
အရာ သူနဲ့ကျွန်တော်သာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ သိပ်လှတဲ့အိမ်မက်ပေါ့… အဲ့ဒီအတိတ်ကို ပြန်မရရင်
တောင် အဲ့ဒီအတိတ်အိပ်မက်ကို ကျွန်တော် မနိုးတမ်းမက်နေချင်တယ်…. အဲဒီ အတိတ်မှာပဲ ကျွန်တော် တ၀ဲလည်လည်
နေခဲ့လိုက်ချင်တယ်… အခုတော့ သူဟာ… သူဘ၀ကို သူဦးဆောင်နိုင်နေပါပြီ… အရာရာကို ကျွန်တော်မပါပဲ ရင်ဆိုင်ရဲနေ
ပါပြီ… အိပ်မက်တွေကို သူရဲရဲကြီးမက်တတ်လာသလို အိပ်မက်တွေကို သူ.. လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်နေပါပြီ…
ကျွန်တော့် လက်ကိုဆွဲ လောကကြီးကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲသူတစ်ယောက်ကနေ.. ကျွန်တော် မပါပဲ လောကကြီးကိုရင်ဆိုင် ရဲ
နေပါပြီ… သူပြောတော့ ကျွန်တော့်ကြောင့်တဲ့လေ… ကျွန်တော့် သတ္တိတွေ သူဆီကူးစက်သွားတာတဲ့… ဒါဆို ကျွန်တော်
က ကျွန်တော့် အသဲကွဲမြိုတော်ကို တည်ဆောက်တဲ့ ဗိသုကာပညာရှင်ပေါ့.. ကျွန်တော့် အထီးကျန်ကမ္ဘာကို ဖန်တီးတဲ့… ဖန်ဆင်းရှင်ပေါ့… ကျွန်တော့် အနာဂတ်ကို ပြိုကျစေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးပေါ့… အခုဆို သူ့ရင်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အတွက် နေရာလုံလောက်စွာမရှိတော့ .. သူအိပ်မက်များက နေရာယူကုန်ပြီ .. သူ့ဘ၀မှာ ကျွန်တော်ဟာ မရှိမဖြစ်မဟုတ်တော့… မလိုအပ်တော့သော.. တစ်ချိန်ကလိုအပ်ချက်သာ ဖြစ်တော့သည်…။
တကယ်တော့ သူပြောသလို .. ကျွန်တော့် သတ္တိတွေ သူဆီကူးစက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး.. ပေးလိုက်တာပါ… သူမရှိ
နိုင်တော့တဲ့ ကျွန်တော့် ဘ၀ကို ကျွန်တော် ရင်မဆိုင်ရဲတော့ပါဘူး.. သူအချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးခဲ့တဲ့ နှလုံးသားကလဲ
သူ့အချစ်ကို တောင့်တနေသလို သူလက်ကိုဆွဲခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက လဲ သူ့လက်ကလေးကို တောင့်တနေပါတယ်…
အခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ သတ္တိတွေ မရှိတော့ပါဘူး.. သူ့ကိုဟိုးအဝေးကြီး မထွက်သွားပါနဲ့လို့ ပြောဖို့တောင် သတ္တိမရှိ
တော့ပါဘူး… သူအိပ်မက်တွေ လှပစေချင်တယ်.. သူဘ၀ကို သာယာစေချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် သူရင်ထဲမှာ ကျွန်တော်
ကို ထာဝရ ရှိနေစေချင်တယ်… ကျွန်တော့်ရင်ထဲ သူအမြဲ ရှိနေသလိုပေ့ါ…. ဒါကြောင့် သူ့ကို မတားရက်ခဲ့သလို.. တားဖို့လဲသတ္တိမရှိပါဘူး.. အမှန်တော့ သူမုန်းသွားမှာကို ကြောက်နေမိတာပါ…. အခုတော့ ကျွန်တော် ကျန်ရစ်ပြီလေ…
သူလိုချင်တဲ့ ဘ၀ သူရဖို့ သူသွားတော့မှာပါ… ကျွန်တော်က တော့ လက်ပြရုံသက်သက် ကျန်ရစ်သူ အထီးကျန်လူ
သားပေါ့… သူမျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းပြီး လက်ပြကျောခိုင်းသွားတော့…အပြုံးတုတွေ အထပ်ထပ် နဲ့ လက်ပြနှုတ်ဆက်
နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် မျက်ရည်မိုးတွေ တားမရအောင် မုန်တိုင်းထန်ခဲ့ပါတယ်.. သူမမြင်ပါစေနဲ့…သူခရီးဖြောင့်ဖြူးပါစေ….
မသွားပါနဲ့လို့ ကျွန်တော် တတွတ်တွတ် ရွတ်နေမိတယ်… သူမကြားပါစေနဲ့..သူဘ၀လှပပါစေ…သူ.. မျှော်လင့်ချက်
အလင်းရောင်တွေနဲ့ လင်းလက်တဲ့ဘ၀တစ်ခုဆီကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ…
အမှောင်အတိကျနေတဲ့ မျော်လင့်ချက်မဲ့သွားတဲ့ ကျွန်တော့် ဘ၀ကို သူ… မေ့နိုင်ပါစေ…
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, April 02, 2009 in ဟာသ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, April 01, 2009 in ဇာနည်ကြိုက်တာဒါလေးတွေ
မနှစ်က နှစ်ဦးပိုင်းမှာ ကျွန်မ အိမ်ကို ရှင်းလင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့စဉ်က ကျွန်မရဲ့ ရင်သွေး နှစ်ဦးကလည်း ကျွန်မက ကူညီ
ကာ အိမ်ကို ရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ သားဖြစ်သူက သေတ္တာများ၊ ကတ္တူပုံးများကို မွှေနှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်မဆီကို လက်ကိုင်ပုဝါတစ်ထည်နဲ့ ထုပ်ပိုး
ထားတဲ့ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ အညိုရောင် အကြွေစေ့လေးကို ကိုင်ဆောင်ပြီး လာမေးပါတယ်။
“မေမေ…သား ဒီ အကြွေစေ့လေးကို ယူလို့ရမလား…သား…ဒီ အကြွေစေ့နဲ့ ဆော့လို့ ရမလား”
ကျွန်မက တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေဟာ လက်ရှိ အချိန်ကနေ အတိတ်ကာလ တစ်ခုဆီ ချက်ချင်း ရောက်ရှိသွားပြီးနောက်
“သား ဆော့ချင်ရင် တခြား အကြွေတွေကို ယူဆော့လို့ရတယ်… ဒီ အကြွေစေ့ကိုတော့ ယူ မဆော့ပါနဲ့” လို့ ပြောလိုက်
“ဒီ အကြွေစေ့က တခြား အကြွေစေ့တွေနဲ့ မတူဘဲ ထူးခြားတဲ့ အကြွေစေ့ပေါ့…ဒီအကြွေစေ့ကို မေမေ့ကိုပေးသွားတဲ့ အမျိုး
သမီးကြီးကို မေမေ နောက်ထပ် မြင်တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး”
ကျွန်မက သားကို ပြောရင်းနဲ့ အကြွေစေ့လေးကို သားဖြစ်သူရဲ့ လက်ထဲမှ ညင်သာစွာ ယူလိုက်ပါတယ်။
“ဒီ အကြွေစေ့က သူ့ ကာလတန်ဖိုးထက် ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြွေစေ့ပဲ”
ကျွန်မရဲ့ စကားကို ကြားတော့ သားဖြစ်သူက ကျွန်မကို နားမလည်နိုင်စွာပဲ အံအားသင့်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်မ
က သား နားလည်အောင် ရှင်းပြရပါတော့တယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တုန်းက ကျွန်မက Niger ဆိုတဲ့ သဲမုန်တိုင်းထန်တတ်တဲ့၊ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ အာဖရိက တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ၅
လကြာမျှ ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုကြောင့် ကောက်ပဲသီးနှံ မဖြစ်ထွန်းမှုကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး
အခြေအနေက မကောင်းလှဘဲ တောင်းစားသူ ဦးရေများတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ တောင်းတဲ့
သူတွေ များပြားလှတာကြောင့် ကျွန်မ အဲဒီနေရာမှာ အတော်လေးကို စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် လက်ဆောင် …လက်ဆောင် ဟုအော်ကာ တောင်းနေကြတဲ့ အသံတွေ လမ်းတွေပေါ်မှာ ကြားနေ
ရပါတယ်။ (တစ်ချိန်က ပြင်သစ်ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ တိုင်းပြည်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို သုံးစွဲကြပါတယ်။)
ကျွန်မရဲ့ သူနာပြုအလုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်အပြီးမှာ ကျွန်မရဲ့  သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ အတူ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း
တစ်ခုကို အကူအညီ ပေးဖို့ အတွက် အနီးအနားက Burkina Faso ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာက ပိုပြီး
စိမ်းလန်းတယ်။ ကိုကာကိုလာကလည်း ပိုပြီး အရသာရှိတယ် လို့ ဒေသခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ထောက်ခံစကားတွေ ကြားရပြီး
အဲဒီနေရာလေးကို ကျွန်မတို့ ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးတည်ရာဖြစ်တဲ့ Burkina ကို အငှားကားဖြင့် ရောက်ရှိလာကြတဲ့ အချိန်မှာ ညမှောင်နေပါပြီ။ ကျွန်မတို့ရဲ့
ခရီးဆောင် အ၀တ်သေတ္တာများ၊ အ၀တ်အိတ်များကို အငှားကားပေါ်မှ ချပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံး၊
လက်ပွေ့အိတ် တစ်လုံး၊ အ၀တ်သေတ္တာ အကြီး တစ်လုံး ပါ ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကို ခြေထောက် နှစ်ချောင်း
ကြား ညှပ်ထားပြီးနောက် ကျွန်မရဲ့  အ၀တ် သေတ္တာ ကို လှမ်းယူ နေစဉ်မှာ အမှောင်ထဲမှ လူနှစ်ဦး မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့
ဖြေးညှင်းစွာ ကျွန်မရဲ့  အနားကိုကပ်လာပြီးနောက် ကျွန်မရဲ့  လက်ပွေ့အိတ်ကို ဆွဲယူ မောင်းပြေးသွားပါတယ်။ စက္ကန့် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အဲဒီ မော်တော်ဆိုင်ကယ်က ညအမှောင်ထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။
အဲဒီ ကျွန်မရဲ့ လက်ပွေ့အိတ်ထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုက်ဆံနဲ့ ခရီးသွား ချက်လက်မှတ်၊ ကင်မရာ၊ လေယာဉ်
လက်မှတ် နဲ့ တခြား ကျွန်မအတွက် အရေးပါတဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ ၊ ပစ္စည်းများ ပါသွားပါတယ်။ ကျွန်မ အကြီးအကျယ်ကို ဒုက္ခရောက်တော့တာပါပဲ။ ကျွန်မတိုင်းပြည်ရဲ့ သံရုံးဖြစ်တဲ့ သြစတေးလျ သံရုံးကလည်း ကျွန်မရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ အနီး
ဆုံးဆိုလို့ အီသီယိုပီးယားမှာပဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်မက ကျွန်မမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေချာစွာ စောင့်ကြပ်နေပြီး ဒေသခံလူတွေကိုလည်း
အမြဲ သံသယ မျက်လုံး ဖြင့်သာ ကြည့်နေပါတော့တယ်။ တာဝန်ရှိသူများက မေးမြန်းတာတွေကို လည်း ကျွန်မက စိတ်ရှုပ်
ခြင်းများ ၊ စိတ်မရှည်ခြင်းများ နဲ့သာ ပြန်ဖြေခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်မှာ ဖြစ်နေတာက အဲဒီနေရာကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်သွား
အဲဒီ နေရာကိုလည်း ငရဲပြည်လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ ထင်နေတော့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Burkina ကလမ်းတွေပေါ်မှာ ကျွန်မ သွား
လာနေရင်းနဲ့ လမ်းပေါ်က တောင်းစားနေတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ဦးက သူ့လက်ဖ၀ါးကို ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာရှေ့ ကိုဖြန့်ကာ
ကျွန်မက အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု၊ ဆင်းရဲမှု၊ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု၊ သူခိုးပေါများမှု၊ ရာသီဥတုပူပြင်းမှု၊ ဖုန်ထူ
မှု၊ မပြည့်စုံ မလုံလောက်မှုနဲ့ မလိုအပ်ဘဲ အချိန်ဆွဲသော ရုံးလုပ်ငန်း တွေကို အတော်လေးကို စိတ်အချဉ်ပေါက်နေခဲ့တာနဲ့ စိတ်အတော်တိုသွားပြီး အဲဒီ အမျိုးသမီးကြီးကို ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ပဲ
“ကျွန်မဆီမှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး…လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပတ်ကပဲ ကျွန်မ ဒီကိုရောက်ရောက်ချင်း သူခိုး ခိုးလို့ ကျွန်မပိုက်ဆံတွေ
လည်း ကုန်ပြီ… ကျွန်မ ဒီတိုင်းပြည်ကနေတောင် ထွက်လို့ မရတော့ဘူး… ကျွန်မမှာ ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး …ရှင့်ကိုလည်း
ဘာမှ ပေးစရာ မရှိဘူး”
လို့ အော်ပြောလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီးကြီးက ကျွန်မ ပြောတာတွေကို သေချာကို ဂရုပြု နားထောင်ပါတယ်။ ပြီး
နောက် သူမရဲ့ အရေးအကြောင်းတွေထင်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ သွားတွေမရှိတဲ့ အပြုံးနဲ့ ကျွန်မကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖော်ဖော်
ရွေရွေ ပြုံးပြပါတယ်။ သူမရဲ့ ဂါဝန် အိတ်ကပ်ထဲကို လက်နှိုက်လိုက်ပြီးနောက်
“ဒါဆိုလည်း မင်းကို ငါက ကာဒို ပေးပါတယ်”
ဟုဆိုကာ ညိုညစ်နေသော အကြွေစေ့ တစ်စေ့ကို ကျွန်မရဲ့လက်ဖ၀ါးထဲကို ထည့်ပေးပါတယ်။
ကျွန်မ သူမကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ ဒီ အကြွေစေ့ ဟာ တကယ့်ကို သေးနုပ်လွန်းတဲ့ ငွေကြေး
ပမာဏပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အမျိုးသမီးကြီးအတွက်ကတော့ အစားအစာ တစ်နပ်စာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာပဲ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ရှက်ရွံ့ခြင်းကို ခံစားလိုက်ရ ပါတယ်။ ကျွန်မ အရင်က လှုဒါန်းခဲ့တယ် ဆိုပေ
မယ့် ကျွန်မဟာ လူသားချင်း စာနာစိတ်နဲ့ လှုဒါန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တောင်းစားသူ အမျိုးသမီးကြီးက ကျွန်မ
လှုဒါန်းခဲ့တဲ့ ငွေပမဏနဲ့ ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်လောက်တဲ့ အကြွေစေ့ကို ကျွန်မကို ပေးပေမယ့် ဒါဟာ သူ့ ဆင်းရဲငတ်မွတ်
မှုအတွင်းကနေ သူ့အတွက် တန်ဖိုး တစ်ခုခု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ငွေကို ကျွန်မကို ပေးနိုင်၊ လှုဒါန်းနိုင်တဲ့ စိတ် သူ့မှာရှိတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ကျွန်မ အရင်က ထင်မှတ်မထားတဲ့ Burkina Faso က လူတွေရဲ့ အလှတရားကို ကျွန်မ မြင်လိုက်ရတယ်။
အဲဒီ အခိုက်အတန့်လေး က ကျွန်မရဲ့ အမြင်တွေအားလုံးကို ပြောင်းလဲ သွားစေခဲ့တယ်။ အဲဒီ အကြွေစေ့လေးကို ကျွန်မ
အမြဲ သိမ်းထားမှာဖြစ်ပြီး သေးနုပ်လွန်းတဲ့ အရာလေးပင် ဖြစ်လင့်ကစား ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ ခံယူချက်၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးစေတဲ့ အရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Reader’s Digest မှ Cathy Watson ၏ The Other Side of the Coin ကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
Gtalk မှမိုဘိုင်းသို့ SMS Message ပို့နိုင်တော့မည်...